Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ))
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) ကိုအများအားဖြင့် သွေးကင်ဆာရောဂါ၊ အရေပြားကင်ဆာ၊
AIDS ရောဂါသည်များတွင်ဖြစ်သော အရေပြားသွေးကြောများမှဖြစ်သော ကင်ဆာ စသည့်ကင်ဆာရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ထို့ပြင် အသည်းရောင်အသားဝါ B,C နှင့် ကြွက်နို့ကူးစက်ရောဂါ စသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကို ကုသရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
ထိုဆေးသည် ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှ သဘာဝအတိုင်းထုတ်ပေးသော အင်တာဖရွန် ပရိုတင်းများနှင့် အသွင်တူညီပြီး ကင်ဆာရောဂါများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါများကို ကုသရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) ကို အများအားဖြင့် ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ထိုးဆေးအနေနှင့်
ဆရာဝန်များ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ထိုးပေးသော ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးထိုးရာတွင် တနေရာနှင့် တနေရာမတူညီအောင်ထိုးခြင်းဖြင့် အနာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဆေးသည် ရောဂါဖြစ်နေသော နေရာသို့တိုက်ရိုက်ထိုးနိုင်ပြီး သွေးပြန်ကြောထဲသို့လည်း ထိုးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ယေဘူယျ အသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး
သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ၂ဘီ)ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)
သည် မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့် ယင်းကို အရက်သို့မဟုတ်အခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် တွဲမသုံးသင့်ပါ။ ထိုဆေးကို သတိနှင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအသုံးပြုနေလျှင် ကားမောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်လျှင် ရှောင်ကျဉ်ပါ။
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)ထိုးနေစဉ် ကာကွယ်ဆေးများထိုးမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။ သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းပါ။
သည် သွေးမွှားဥ အရေအတွက် ကို လျော့ကျစေသည့်အတွက် သင့်ကို အနာတရဖြစ်လွယ်စေခြင်း၊ သွေးခြေဥစေခြင်းများဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးထိုးနေရင်း သွေးခြေဥခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်အားပြောပါ။
သည် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အနာကျက်နှုန်းကို နှေးစေသည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင် နေထိုင်ပါ။
သင်သည် ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ သွားနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသမှုများခံယူခြင်းများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ဆေးထိုးနေကြောင်း ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
သင်သည် ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ မိမိဘာသာသောက်နေသောဆေးများ၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် သောက်နေသော ဆေးများ၊ တိုင်းရင်းဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်အားဆေးများသောက်နေပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
သည်ကလေးများတွင် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး Interferon and ribavirin ဆေးများသည် ကလေးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုနှင့် အရပ်ရှည်ထွက်ခြင်းတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဆေးထိုးနေစဉ်တွင် ကလေးများ၏ကြီးထွားမှုနှုန်းကို ဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးများတွင်သာမက လူကြီးများတွင် လည်း မူးဝေခြင်း၊ စိတ်အာရုံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် နှလုံးကို ထိခိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် အထူးဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးထိုးသောနေရာတွင် နာခြင်း၊ နီခြင်း၊ ရောင်ခြင်း
တုပ်ကွေးလက္ခဏာများဖြစ်ခြင်း (ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊ကိုယ်လက်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း)
ဆေးကို အသုံးပြုနေစဉ် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း
တို့ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ကြာရှည်စွာ ခံစားနေရပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အခြားသူများနှင့် ယှဉ်လျှင် ပူလွန်း၊ အေးလွန်းနေခြင်း
ရာသီမမှန်ခြင်း (ရာသီစက်ဝန်း အချိန်မမှန်ခြင်း၊ ရာသီမပေါ်ခြင်း၊ နောက်ကျခြင်း)
မျက်နှာ၊ ခြေ လက်များ ဖောရောင်ခြင်း
မျက်လုံးဝါးခြင်း၊ အချို့သော် အမြင်အစိတ်ပိုင်းများကို မမြင်တော့ခြင်း
ထို့ပြင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ကိုယ်တခြမ်းအားနည်းခြင်း၊ စကားမပြောနိုင်ခြင်းများဖြစ်ပါကလည်း ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြသရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထိုဆေးသည် စိတ်အာရုံများ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ပိုဆိုးလာခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် စိတ်အာရုံများရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို နာကျင်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့် သေကြောင်းကြံစည်ခြင်း၊ မူမမှန်သော ၊ ကြမ်းတမ်းသော အပြုအမူများဖြစ်လာလျှင် ဆရ ဝန်အားချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာပါက ဆေးသောက်နေစဉ်တွင် စိတ်ကျန်းမာရေး ကုသမှုများခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးနှင့် ပြင်းထန်စွာဓါတ်မတည့်မှုများဖြစ်ခြင်းသည် ရှားပါးသော်လည်း အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း တို့ခံစားရပါက အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့
ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါဆေးများသည် အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်းဖြစ်စေနိုင်သော ဆေးများဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ခံအားအပေါ်သက်ရောက်စေသောဆေးများ (ဥပမာ- ကင်ဆာရောဂါဆေးများ၊ aldesleukin, cyclosporine)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ကိုယ်အင်္ဂါ အစားထိုးထားသော ခွဲစိတ်မှုများ ခံယူထားခြင်း
သွေးအားနည်းခြင်း (သွေးဖြူဥများ ၊သွေးနီဥများ အားနည်းခြင်း)
သွေးထွက်ခဲခြင်း၊ သွေးခဲခြင်းများမူမမှန်ခြင်း (အဆုတ်တွင် သွေးခဲပိတ်ဆို့သောရောဂါ)
နမိုးနီယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ အဆုတ်သွေးကြောများတွင် ဖိအားများခြင်း(အဆုတ်သွေးကြောများတွင် ဖိအားများခြင်း ဖြင့် အဆုတ်သို့ထောက်ပံ့ပေးသော သွေးများလုံလောက်မှု မရှိတော့ခြင်းကြောင့် မောပန်းခြင်း၊ အသက်ရှုမြန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။)
မျက်လုံးနှင့် ဆိုင်သော ပြသနာများ
သွေးဥများ မူမမှန်ဖြစ်ခြင်း (သွေးအားနည်းခြင်း၊ သွေးဖြူဥများ၊သွေးမွှားဥများ အားနည်းခြင်း)
နှလုံးရောဂါ(နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသောကြောင့် နှလုံးအောင့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း)
ကိုယ်ခံအားနှင့် သက်ဆိုင်သောရောဂါများဖြစ်ခြင်း (အရေပြားရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ရောဂါ)
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ- အူရောင်ခြင်း)
အသည်းရောဂါ (ကိုယ်ခံအားစနစ်မူမမှန်မှုကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်းပျက်စီးဆုတ်ယုတ်ခြင်း)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးများ ထိခိုက်ခြင်း (ဥပမာ- စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း)
သွေးထဲတွင် မကောင်းသော အဆီဓါတ်များ များလာခြင်း
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ အရက်သေစာများသောက်သုံးခြင်း တို့ရှိလျှင် သင့်အတွက် စိတ်ချရမှုရှိစေရန် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသည်းရောင် အသားဝါ C ရောဂါ
ဆေးကို တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် အရေပြားအောက်ဖြစ်စေ၊ အသားထဲဖြစ်စေ ထိုးပါ။
အသည်းရောင် အသားဝါ B ရောဂါ
ဆေးကို တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် အရေပြားအောက်ဖြစ်စေ၊ အသားထဲဖြစ်စေ ထိုးပါ။ ၁၆ ပတ်ဆက်တိုက် ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးကို တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် အရေပြားအောက်ဖြစ်စေ၊ အသားထဲဖြစ်စေ ထိုးပါ။ ၆ လဆက်တိုက် ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေပြားရှိ မီလနိုဆိုက် ကင်ဆာရောဂါ
အကြောဆေးကို ၅ ရက်ဆက်တိုက် ၄ ပတ်ထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး အရေပြားအောက် ထိုးဆေးကို ၄၈ ပတ်ကြာအောင် ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရည်အိတ်များမှဖြစ်သော မီလနိုဆိုက် ကင်ဆာရောဂါ
ထိုးဆေးကို အရေပြားအောက်တွင် တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် ၁၈ လဆက်တိုက် ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောထိုးဆေးကို တပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် တရက်ခြားစီ ၃ ပတ်ထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး ၁၆ ပတ်ကြာအောင် ထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေပြား သွေးကြောများမှဖြစ်သော ကင်ဆာရောဂါ
ကလေးတွေအတွက် Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) ကိုသင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Intron A (အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ifex ထိုးဆေးအရည် 3.8 ml ဗူး (6 million International Units/ml)
Ifex ထိုးဆေးအရည် 3.2 ml ဗူး (10 million International Units/ml)
အင်ထရွန် အေ (အင်တာဖရွန် အယ်လ်ဖာ ၂ ဘီ) က ိုထိုးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထိုးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲထိုးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးပြီး ထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ သင့်ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီး ဆေးအညွှန်းကို မေးမြန်းပါ။
Intron® A Injection.http://www.webmd.com/drugs/2/drug-37/interferon-alfa-2b-injection/details#images.Accessed November 30, 2016
Intron® A.https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a690006.html.Accessed November 30, 2016
interferon alfa 2b (Rx).http://reference.medscape.com/drug/intron-a-interferon-alfa-2b-interferon-alfa-2b-342615.Accessed November 30, 2016.